loop - Synonyms of loop | Antonyms of loop | Definition of loop | Example of loop | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for loop
Top 30 analogous words or synonyms for loop
အော်ပရေရှင်နယ် အင်ပလီဖိုင်ယာ လက်တွေ့အခြေအနေတွင် စံအခြေနေတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ မြင့်မားသော open-loop gain များ၊ မြင့်မားသည့် input impedance နှင့် အလွန်နည်းသော output impedance ရှိသည်။
Math rock သောစည်းဝါးများကြောင့် math rock အုပ်စု၏ drummer များသည် အခြားအုပ်စုများထက် ယိုင်ယိမ်းမှုများရှိခဲ့သည်။ guitar ကို tapping လုပ်၍ တီးခတ်ကြသော math rock အုပ်စု guitar သမားများကို ရှာဖွေရန်ခေတ်မစားတော့ပါ။ loop pedal များကို တစ်ခါတစ်ရံပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဂီတာများမှာ အခြား upbeat rock song များထက် clean tone များဖြင့် တီးခတ်ကြသည်။ အခြားအုပ်စုများသည် distortion များဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။
ဖိုင်ဘာမှ အခြားကွန်ယက်သို့ Fiber to the Xစနစ်ဟာ ဘယ်broadband network ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မဆို ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးOptical fiber အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုထားတာက Last mile telecommunication တွေအတွက် သာမန်သုံးနေကျ သတ္ထုLocal loop ကို အစားထိုးနေရာ ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ FTTN , FTTC,FTTB, FTTH နဲ့ FTTH စတဲ့ X တစ်လုံးကိုဖြည့်ပြီး Fiber မျိုးဆက်ကို တဖြည်းဖြည်း Configurate လုပ်ယူလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Jointly developingaworld-class metropolis with Shenzhen: In my Election Platform, I have put forward the vision of developing the Hong Kong-Shenzhen metropolis and undertaken to strengthen our co-operation. My proposals met with positive responses from the Shenzhen authorities. We shareacommon goal and have had some preliminary exchange of views. Currently, we are discussing airport collaboration and the development of the Lok Ma Chau Loop.
ပြတိုက် မပြတိုက် ပုဂံပြတိုက်သစ်ကို ၁၆၊ ဇွန်၊ ၁၉၉၉ မှာရောက်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ရက်ဆက်ပြီး သွားသေးတယ်။ ဘေးမြင်ကောက်ကြောင်းပုံ (silhouette) နဲ့ပဲ ရောက်တဲ့နေရာက ဆက်မ သွားပဲ ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်။ ဥပမာ ကပ်ပြီးပြောရရင် ပင်လယ်က ဝင်လာတဲ့ သင်္ဘောပေါ်က ရန်ကုန်မြစ်ဝ ရောက်တဲ့အခါ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး၏ ဘေးမြင်ကောက်ကြောင်း ပုံဟာ နှစ်သက်စိတ်၊ ကြည်နူးစိတ် ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း ပိုသိချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ငါမရောက်မနေ သွားကြည့်ရမယ့်နေရာဟာ ဘုရားကြီးပဲလို့ စိတ်မှာစွဲယူ သတ်မှတ်မိတယ်။ ပုဂံ ပြတိုက်က အဲဒါရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတယ်။ ပုံထုတ်တဲ့ ပိသုကာတွေကို အထင်သေးမိ တယ်။ ပုဂံ ကြည်နူးနှစ်သက် ကြည်ညိုစရာ ဘေးမြင်ပုံလောင်း (silhouette) ကို ဖျက်ဆီးသူ တွေလို့ စိတ်မှာထင်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုဂံရောက်နေတဲ့ ရက်မှာ မြန်မာဗိသုကာအသင်း ကလည်း ကုမုဒြာဟိုတယ်မှာ လူလေးဆယ်ကျော်တည်းခိုပြီး ပုဂံဘုန်းကြီးကျောင်း ဆွေးနွေးပွဲ (seminar) နှစ်ရက်လုပ်တယ်။ မင်းဘူးအောင်ကြိုင်ကို တလေးတစားဖိတ်ပြီး သူပြောတာတွေ ကို ဂရုတစိုက် နားထောင်မှတ်သားကြတယ်။ သူတို့ထဲက ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပဲ ပုဂံ (silhouette) ပျက်သွားပြီလို့ ပြောပါတယ်။ အလှ အယဉ် အမြင့် ဆိုတဲ့ အာနန္ဒာ၊ ဂေါ်တောပုလ္လင်၊ သဗ္ဗညု ဂူကျောင်းဘုရားစေတီတွေ တိမ်ပြီး (fade out) ရှုခင်းထဲက မှိန်ထွက် သွားတယ်။ တိုင်းတပါးမှာ လန်ဒန်စိန်ပေါဘုရားရှိခိုးကျောင်းနားမှာ မိုးမျှော်တိုက် (skyscraper) ကြီး မဆောက်ရ။ ဆူးလေဘုရားနားမှာ လမ်းကူးတံတားကြီးတွေ၊ တိုက်မြင့်ကြီးတွေ ဝင်လာ တော့ ဆူးလေဘုရားဟာ မူလနေရာက မရွေ့ဘဲ ပျောက်သွားတယ်။ ရှိဂါကို (Chigaco) မှာ အထပ်ငါးဆယ် ခြောက်ဆယ်ဝိုင်း (loop) ထဲမှာ အင်ပါယာစတိတ် (Empire State building) က အထပ်တရာ့သုံးဆယ်ထပ်နဲ့ ဆောက်ထားပေမယ့် မင်ရှီဂန်(Michigan) ရေကန်ကြီးထဲက မြင်နေကျ မြို့ဘေးမြင်လိုင်းကောက်ကြောင်းပုံဟာ ပျက်မသွားဘူး။ တိဗက်(Tibet) က လာဆာ (Lhasa) မြို့တော်ခြေက တောင်ထိပ်ထိ ခံတပ်နန်းတော်ကြီး (Potala) ဆောက်တော့လည်း လာဆာ (silhouette) ပျက်မသွားဘူး။ မန္တလေးမှာ မြေနန်းပြသာဒ်ကို ပြတိုက်လုပ်တာကမှ တော်သေးတယ်။ အေးဗျာ၊ ပုဂံမြင်ကွင်းတော့ အတော်များများ ပျက်သွားပြီ။